सानिमा बैंकले नारी बचत खातावापत रु. १ विपन्न नारीको लागि उपयोग गर्ने - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
सानिमा बैंकले नारी बचत खातावापत रु. १ विपन्न नारीको लागि उपयोग गर्ने
काठमाडाैं । सानिमा बैंक लिमिटेडले सानिमा नारी बचत खाता संचालनमा ल्याएको छ ।
“बचत आफ्नो लागि सहयोग नारीको लागि” भन्ने उद्देश्यका साथ बैंकले ल्याएको यस योजनामा हरेक नारी बचत खाता वापत बैंकले आफ्नो तर्फबाट मासिक रुपमा रु १ विपन्न वर्गका महिलाको उत्थान तथा स्वास्थ्य उपचारमा उपयोग गर्दै आएको छ ।
यस सँगै प्रविधियुक्त बैंकिङ्ग तथा नगद रहित कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि बैंकका नारी खातावाहक ग्राहकले बैंकको डेबिट कार्डबाट बिल भुक्तानी गर्दा हरेक शनिबार १५ प्रतिशत क्यासब्याक वा अधिकतम् रु ५०० सयसम्म छुट प्रदान गर्ने भएको छ ।
जसबाट हरेक महिना सामान खरिदमा रु २००० रूपियाँसम्म बचत गर्न सकिनेछ । उक्त क्यासव्याक योजना ०७६ फागुनदेखि २०७७ वैशाखसम्म तीन महिनाको लागि लागू हुनेछ ।
काठमाडौ । सुनको भाउ लगातार वृद्धि भएर सोमबार नयाँ उचाइमा पुगेको छ। सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार […]
मानवअधिकारवादी नेता पद्मरत्न तुलाधरको निधन
काठमाडौं । बामपन्थी तथा मानवअधिकारवादी नेता पद्मरत्न तुलाधरको निधन भएको छ । केही दिनअघि अस्पताल भर्ना भएका […]
आन्दोलन उग्र बन्न थालेपछि भैरहवामा कर्फ्यू
भदौ ३। भैरहवा, सीमांकनको बिरोधमा जारी आन्दोलन उग्र बन्न थालेपनि भैरहवहामा कर्फ्यू आदेश जारी गरिएको छ । […]
सलमान किन जाँदैछन् साइप्रस?
एजेन्सी, सलमान र लुलियाको सम्बन्धबारे पछिल्लो समय बलिउडमा व्यापक चर्चा चल्न थालेको छ । त्यसो त हल्ला पनि छ– […]
जनकपुरमा पुगेर के भने भट्टराईले ?
असोज १२ । जनकपुर, एकीकृत नेकपा माओवादी र संसद् त्यागेको चौंथो दिन मंगलबार जनकपुर पुगेका पूर्वप्रधानमन्त्री […]